#QABYAALADCHALLENGE - Anti Tribalism Movement : The ATM
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) ayaa bilaabay barnaamij wacyi-gallin ah oo ku saabsan dhibaatada Qabyaaladda. Waxaa barnaamijkaan loogu talagalay in lagu baraarujiyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan.
Barnaamijkaan wacyi-gallinta ah ayaa loogu magac daray #QABYAALADCHALLENGE, waana barnaamij ka socon doona barta INTERNET-ka. Waxaad kaga qeyb qaadan kartaa barnaamijka si maqal, muuqaal (ugu badnaan 3 daqiiqo), qoraal iyo sawir farshaxan ah intaba. Wuxuuna ku saleysan yahay 3 qodob oo aas-aasi ah:
Wacyigallin guud oo ku saabsan xummaanta Qabyaaladda.
Inuu qofku nala wadaago wixii waayo-aragnimo ah oo ay ka mid yihiin haddii uu Qabyaalad ku dhaqmay, ama lagula dhaqmay ama uu maqlay sheekooyin Qabyaalad ah oo dad kale lagu sameeyay.
Inuu qofku balan-qaado ka fogaanshaha wax waliba oo ay Qabyaalad ku jirto. Waana balan-qaad uu qofku ka sameynayo Illaahay hortiisa iyo bulsha weynta Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan in barnaamijkan wacyi-gallinta ah uu yahay barnaamij ay ka reeban yihiin 3 qodob oo kala ah:
In aad sheegto sheeko si gaar ah ugu saabsan Qabiil, goboleysi, koox ama shaqsiyaad gooni ah.
In aad sheegto sheeko kala fogeyneysa ama iska horkeyneysa dadka Soomaaliyeed.
Haddii aad duubeyso muuqaal aad kaga qeyb qaadaneyso barnaamijka #QABYAALADCHALLENGE fadlan waxa aad duubtaa muuqaal ku haboon barnaamijkaan wacyi-gallinta ah.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) waxa ay dhammaan dadka Soomaaliyeed ku dhiiri-galinayaan inay ka qeyb qaataan la dagaalanka Qabyaaladda oo ah cudur dilaa ah oo qeyb weyn ka qaatay burburka dalkeena.
Waxaa barnaamijka #QABYAALADCHALLENGE ka qeyb qaadan doona dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin dad magac, sharaf iyo xushmad gooni ah ku dhex leh dadka Soomaaliyeed. Waxaan rajeyneynaa in aad nagala qeyb qaadato si aan uga hortagno xummaan Qabyaaladda.
Wixii faahfaahin dheeri ah fadlan nagala soo xiriir halkaan: info@theatm.org, Facebook: Anti Tribalism Movement, Twitter: @movementatm, Instagram: movementatm ama booqo boggeena www.theatm.org ee sidaas iyo xiriir wanaagsan Insha’Allah. Mahadsanidiin